बाबुराम, गोर्खा र लुम्बिनी-Nagarikaawaj.com
बाबुराम, गोर्खा र लुम्बिनी
मनिकर कार्की (निवर्तमान)
अहिले देशैभरी चुनावी माहोल छ । त्यो भन्दा अझ बढी रुपन्देहीको छ । समग्र रुपन्देहीको चुनावी माहोल भन्दा क्षेत्र नं. ४ को अझ बढी छ । ४ नं. क्षेत्रको कुरा गर्दैगर्दा बुटवलको अझ बढी छ । राष्ट्रियस्तरका मिडियाहरुले पनि यस क्षेत्रको चुनावी अंकगणितलाई लिएर निकै समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गरिरहेका छन् ।
आखिर किन यसपटक रुपन्देहीले समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ ? निश्चय पनि यस क्षेत्रबाट एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् र नै यहाँको चुनावी सरगर्मी अझ तात्तिंदै गएको महशुस हुन्छ । अझ त्यसमाथि पनि नेकपा एमालेले आफ्नो ‘किल्ला’को रुपमा परिभाषित गरेको क्षेत्र नं. ४ मा माओवादीका शीर्ष नेताले उम्मेद्वारी दि“दा चुनावी माहोल तात्तिने नै भयो । त्यसै त गर्मी हुने बुटवलमा चुनावी सरगर्मीले शरद् ऋतुको आगमनलाई पटक्कै स्वीकार गरेको छैन ।
चुनावी रणनीतिमा तीन पार्टीको विश्लेषण आआफ्नै होला तर, धरातलीय यथार्थ र चुनावी एजेण्डा हेर्ने हो भने एकीकृत माओवादीकै एजेण्डाहरु शक्तिशाली देखिन्छन् । हुन त यो आलेख तयार पार्दासम्म सबै दलहरुको चुनावी घोषणापत्र सम्पूर्ण रुपले सार्वजनिक भइसकेको छैन । सार्वजनिक भइनसकेको तर प्रेसबाट प्राप्त सूचनालाई आधार मान्दा एमालेले घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै मध्यमार्गी धारणा अघिसारेको छ । एमाओवादीले अग्रगामी संविधान र कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई मुख्य विषय बनाएर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको आर्थिक समृद्धिको ४० वर्षे मार्गचित्रसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि उसले संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतालाई नै आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । यसरी चुनावी नारा र एजेण्डाहरुलाई हेर्दा एकपटक फेरि परिवर्तन र समृद्धिको एजेण्डामा माओवादी खरो उत्रिएको छ । माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुख्यगरी संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुहरु, लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु जसमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सुस्पष्ट ढंगले उठाएको छ । यी मुद्दाहरुले समकालीन नेपालको समष्टिगत आर्थिक, राजनीतिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले–कांग्रेसहरुको चुनावी मुद्दा रचनात्मक होइन परन्तु माओवादीका एजेण्डाहरुमा प्रतिक्रियात्मक देखिन्छन् ।
फेरि लुम्बिनीतिरै फर्कौं । अहिले सबै जसो राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा लागिरह“दा लुम्बिनी अञ्चलले समग्र मुलुककै ध्यानाकृष्ट गरेको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराईले रुपन्देहीबाट चुनाव लड्ने भएपछि उनको मूल्याङ्कनका लागि फेरि पनि शब्दहरु खर्चिइन थालिएको छ । अझ यसो भनौं माओवादीइतरका राजनीतिक पार्टीहरुले बाबुराम भट्टराईलाई एउटा ‘घमण्डी’ तथा ‘पाखण्डी’ तथा ‘फिरन्ते’ नेताको रुपमा चित्रित गर्दैछन् । यसले निश्चय पनि पुराना संसद्वादी दलहरु एमाले र कांग्रेस बाबुराम भट्टराईको विद्वता र उनको लोकप्रियताबाट अत्तालिएको नै पुष्टि हुन्छ । निश्चित रुपमा चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि सबैले भरमग्दुर प्रयत्न गर्दछन् । फेरि नेपाल जस्तो तेश्रो मुलुकका देशहरुमा राजनीतिक फगत विचारबाट मात्रै पनि चल्दैन । यस्ता देशहरुमा राजनीतिक ‘मनि’ र ‘मसल्स’कै आधारमा चल्दोरहेछ । दसैंअघि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमुक्त भएका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई स्वागत गर्ने कार्यकर्ताहरुको भीडले पनि त्यसैको संकेत गरेको छ ।
फेरि अर्को कुरा संविधानसभाको निर्वाचनपछिको विगत ६ वर्षे कालखण्डलाई नियाल्ने हो भने पनि हामी त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएको पाउ“छौैं । खासमा राजनीति विचार र एजेण्डाका आधारमा चल्नुपर्ने हो । तर, यहा“का अधिकांश पुराना दलहरुमा नया“ एजेण्डा छैन । जोस“ग एजेण्डा नै छैन, त्यसबाट राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ । त्यसकारण खासगरी पुराना संसद्वादी दलहरुले माओवादीले सारेका एजेण्डाहरुमा आफ्नो प्रतिक्रिया दर्ज गरेरै राजनीति धानिरहेका छन् । सुन्दा तीतो लाग्छ, तर यथार्थ यहि हो । अनि उनीहरुले चुनावी प्रचारको सन्दर्भमा पनि कुनै रचनात्मक उपाय अपनाउन सकेनन् । फगत युद्धकालीन अवस्थामा भएका गल्ती, कमजोरीहरुलाई चिहानबाट ब्यू“ताएर माओवादीको बद्ख्वाईं गरेरै चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरुलाई चुनावी प्रचारको थलो बनाइएको छ । ठीक छ, दलहरुले चुनाव प्रचारमा प्रविधिको प्रयोग गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो । तर, त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा वेवसाइटहरुमा जनयुद्धकालीन परिवेशका घटना र दृष्यहरुलाई नकारात्मक ढंगबाट प्रचार गरेर माओवादीलाई ‘आततायी’ शक्तिको रुपमा जर्बजस्त स्थापित गर्ने बद्नियत नै देखिन्छ । ठीक हो, हिजो मुलुक युद्धमा थियो । माओवादीले आफ्ना परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न घोषित रुपमै जनयुद्धको मार्ग अवलम्बन गरेको थियो । जब घोषित रुपमा युद्धको शंखघोष हुन्छ, त्यहा“ स्वतः हिंसाले स्थान पाउ“छ । फेरि माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई दबाउनको लागि राज्यले ‘हिंसा’को मार्ग अवलम्बन गरेपछि माओवादीबाट प्रतिहिंसा हुने नै भयो । यसलाई युद्धको विशिष्ट परिवेशको रुपमा बुझिनुपर्छ ।
हिजोको जनयुद्ध नेपाली राजनीतिक इतिहासको कुनै काल्पनिक कथा होइन । त्यो यथार्थ हो । त्यही युद्धको जगमा मुलुकमा दोश्रो जनआन्दोलन संभव भयो र त्यसले मुलुकमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गरेर यसको अन्तर्यलाई गलत ब्याख्या गरिन्छ भने त्यो इतिहासको उल्टो बुझाई हुनेछ । त्यो फगत इतिहास बंग्याउने कुचेष्टा मात्रै हुनेछ । त्यसो त विगतको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई के दियो ? भन्ने सवाल पनि ज्वलन्त रुपमा उत्पन्न भएको छ नै । यद्यपि विगतको राजनीतिक परिवर्तन युगान्तकारी हु“दाहु“दै पनि त्यसले जनताको उत्कट चाहना र समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको सा“चो हो । खासगरी मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकास हुन नसक्दा त्यसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकेको छैन ।
तर, यसो भन्दै गर्दा मुलुकमा चलेका विभिन्न खाले संघर्ष र आन्दोलनका श्रृंखलाहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सामानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका एजेण्डाहरु केही पनि होइनन् भन्नु ‘मानो पोखेर गेडा टिप्ने’ प्रवृत्ति जस्तो हो । निश्चित रुपमा अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणले मुलुकलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संघारमा उभ्याइदिएको छ, अब त्यसलाई संस्थागत गर्न एउटा जनअनुमोदिन स्थायी राजनीतिक प्रणाली जरुरी छ । त्यसका लागि चुनावमा जान लागिएको हो । जब मुलुकमा जनादेश प्राप्त स्थायी राजनीतिक प्रणाली र त्यसै अनुसारका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने सरकार निर्माण हुन्छ, तब कागजमा देखिएका यी राजनीतिक रुपान्तरणका मुद्दाहरुलाई जनमुखी ढंगले क्रियान्वयन गर्न सकिन्छ ।
हो, राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रचारवाजी गरिरह“दा यी मुद्दाहरुलाई जनमुखी बनाउन अथवा जनताको एजेण्डा बनाउन केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ? उनीहरुको मौलिक भनाइ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मुद्दाहरु के के हुन् ? यी विषयहरुमा प्रष्ट पार्दै चुनावी दौड गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अन्य पार्टीले गरेको गल्ती कमजोरीलाई चुनावी नारा र मुद्दा बनाइरहेका छन् । आखिर जोस“ग स्पष्ट मार्गचित्र हु“दैन, राजनीतिक मुद्दा हु“दैन उसले फगत अरुको ‘कुरा काट्दै’ हिंड्नु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । त्यसै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा काम नहुनेहरुले टोलछिमेकको कुरा काट्ने संस्कार नै हो । अहिले पुराना संसद्वादी दलहरुले त्यसैको सहारा लिएका छन् ।
फेरि रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ तिरै फर्किऔं । यस क्ष्ँेत्रबाट एकीकृत माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएपछि कुनै अमुक दलले ‘बाबुरामलाई गोर्खा फर्क’ भन्दै चुनावी अभियान छेंडेको छ । दलहरुले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउनको लागि प्रयास गर्नु र त्यसको लागि प्रचारप्रसार गर्नु नौलो कुरा होइन । र, त्यसमा अरु पार्टीहरुको आपत्ति हुनुपनि पर्दैन । तर, यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका बाबुराम भट्टराईलाई ‘फिरन्ते जोगी’लाई झैं बुटवल छाडेर गोर्खा जान भन्नु त्यो कस्तो प्रचारवाजी हो ? एउटा नेपाली नागरिकलाई देशको कुनैपनि भागमा अस्थायी तथा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने, बसाईंसराई गर्ने, हिंडडुल गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । त्यसैगरी देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ भने बाबुरामलाई गोर्खा फर्क भन्नुको तात्पर्य के हो ?
एउटा कुरा के उठेको छ भने पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई दुईदुई ठाउ“बाट चुनाव लड्ने विशेष सुविधा दिनुहु“दैन । प्राकृतिक न्याय र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले त्यो कुरा सही हो । एउटा नेता, चाहे त्यो शीर्ष होस् वा सामान्य उसले पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार भनेको एउटा नेपाली नागरिकले पाउनेसरह हो । शीर्ष नेता भएकै कारण विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक समर्थन गर्न सकिन्छ । त्यसै आधारमा बाबुरामलाई गोर्खा फर्क भनेको हो भने उनलाई ‘गोर्खा छाडेर बुटवल आउनुस्’ पनि भन्न सकिन्थ्यो । यद्यपि दलीय व्यवस्थामा दुई वा तीन ठाउ“बाट यदि शीर्ष नेताहरुलाई राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । फेरि शीर्ष नेतृत्वले एउटै ठाउ“बाट मात्र चुनाव लडेर बस्नु पनि हु“दैन । ऊ चलायमान हुनुपर्छ । ऊ कुनै स्थान, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रविशेषको प्रतिनिधि होइन । ऊ राष्ट्रको नेतृत्व हो । सम्पूर्ण नेपालीहरुको प्रतिनिधि हो ।
बरु नेतृत्वले त मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लड्ने साहस राख्नुपर्छ । खासगरी काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकतालाई तोड्न कै लागि एकीकृत माओवादीको शीर्ष नेतृत्व तराई क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ र त्यसैको सिको अन्य दलहरुले पनि गरेका छन् । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने र उम्मेदवारलाई ‘आफ्नो जिल्ला फर्क’ भन्नुको कुनै तुक रह“दैन । यदि त्यसो भन्ने नै हो भने त जो जहा“ बसेका छन्, ती सबैलाई आफ्नो जिल्ला फर्कि भन्नुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा अहिले विशेषगरी सहरबजार र तराईतिर केन्द्रित भएका नेताहरु सबै आ–आफ्नो जिल्लातिर जानुप¥यो । अनि विस्तारै व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरु पनि फर्किनु प¥यो । के हामीले बनाउन खोजेको नया“ नेपाल त्यस्तै हो ?
चुनाव हो, हारजित हुन्छ । चुनाव जित्नको लागि एजेण्डा चाहिन्छ र त्यो एजेण्डालाई स्थापित गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र आम जनताको समृद्धि र प्रगतिमा भिज्न सक्ने तत्परता । यसरी एकले अर्कोलाई निषेधात्मक तरिकाले प्रचारवाजी गरेर स्वच्छ चुनावको कल्पना गर्न सकिंदैन । आखिर फैसला गर्ने जनताले हो, जनतालाई के थाहा छ भने अहिले एकीकृत माओवादीकै एजेण्डामा मुलुक चलिरहेको छ । यसर्थ, स्थायित्व र समृद्धिका लागि एजेण्डाको जननीकर्तालाई नेतृत्व दिइयो भने संभव हुन्छ, अरु कुरा जनताले नै फैसला गर्ने हुन्, कोही हतोत्साही हुनु पर्दैन । आखिर ‘मूतको न्यानो’ क्षणिक मात्रै हो ।